पूरा भयो त २०७५ को संकल्प ?
२०७४ सालमा ‘सम्पूर्ण’ले केही कलाकारसँग उनीहरूका नयाँ वर्ष अर्थात् २०७५ का संकल्प र योजनाबारे सोधेको थियो। कलाकारले आफ्ना योजना पूरा गरे कि गरेनन् ?
‘पाएसम्म बढीभन्दा बढी फिल्म खेल्ने र जंक फुडलाई त्याग्ने विचार छ।’
योजना लगभग पूरा भयो। मैले छसात वटा फिल्ममा काम गरेँ। जंकफुड खान पनि धेरै कम गरेको छु। विदेश जाने–आउने क्रम बढ्यो। नेपालमा हुँदा जंकफुड खान छोडे पनि विदेशमा नखाई सुख पाइनँ। त्यसैले जंकफुड पूरै छोड्न सकिएन।
‘एक दिन पनि नछुटाईकन जिम जानेछु। काममा फोकस्ड हुनेछु।’
जिम जाने कुरा त पूरा हुन सकेन। कामको सिलसिला भागदौड भइरह्यो। जसले गर्दा जिमका लागि योजनाअनुसार समय मिलाउन सकिनँ। काममा भने एकदमै फोकस्ड भएँ। कुनै हतार नगरी सोचविचार गरेर मात्र काम गरेँ।
‘आफ्नै प्रोडक्सन हाउस खोल्नेछु र बढीभन्दा बढी किताब पढ्नेछु।’
सोचेको जस्तो हुन सकेन। स्वास्थ्य बिग्रेकाले प्रोडक्सन हाउस खोल्ने योजना अधुरै रह्यो। आश मरेको छैन, ढिलोचाँडो भन्ने कुरा भइरहन्छ। तर, किताब पढ्ने योजना भने पूरा भएको छ। यो वर्ष मैले लगभग १५–२० वटा किताब पढेँ। अझ पनि पढ्ने बानीलाई निरन्तरता दिनेछु।
‘नयाँ वर्षदेखि समय तालिका बनाएर काम गर्ने सोच छ।’
योजनाअनुसार समय तालिका त बनाइयो तर आफूले बनाएको टाइम टेबलमा अरू मान्छेको साथ पाइनँ। त्यसैले टाइम टेबलको योजना तुहियो। टाइम टेबलअनुसार खासै चल्न सकिएन।
‘कुनै सामाजिक अभियानमा लाग्ने सोच बनाएकी छु।’
विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भएर अनाथ बालबालिकालाई पढाउने र उनीहरूका लागि गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने काम गरियो। भनेको कुरा पूरा भयो। आगामी दिनमा पनि गायन सँगसँगै सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिनेछु।
‘झडङ्ङ रिसाउने बानी सुधार्ने अठोट गरेकी छु।’
मेरो रिसाउने बानीमा धेरै सुधार आएको छ। रिस उठे पनि बाहिर हाँसेर बस्छु। कसैलाई केही भन्दिनँ। वास्तविक जीवनमा पनि अभिनय गर्छु। आफ्नो रिसाउने बानी सुधार्न मलाई साह्रै गाह्रो प¥यो।
बुद्धि तामाङ, हास्यकलाकार
‘व्यस्तताले गाउँ जान सकेको छैन। यस वर्ष गाउँ जानेछु।’
योजनाअनुसार गइयो गाउँ। एक पटक मात्रै होइन, तीन पटक गाउँ पुगेर आएँ। आफ्नो योजना पूरा गरेँ।
‘सामाजिक सञ्जालमा कम झुन्डिने र किताब धेरै पढ्ने संकल्प गरेकी छु।’
भनेको कुरा सबै कहाँ पूरा हुन्छ र ? पु¥याउन सकिएन नि ! सामाजिक सञ्जालबाट टाढिन सकिएन। आजभोलि फिल्मको प्रचार–प्रसार सामाजिक सञ्जालबाट छिटो र सजिलै हुन्छ। त्यसैले सोसल मिडियाबाट टाढिन हुँदैन भन्ने लाग्यो। किताब चाहिँ योजनाअनुसार धेरै पढेँ।
शोभा त्रिपाठी, लोकगायिका
‘साह्रै मोटी भएकी छु। २०७५ सालमा तौल घटाउनेछु।’
मैले पूरै चार केजी वजन घटाएँ। अहिले स्लिम भएकी छु। विभिन्न कार्यक्रमको भागदौड र जिमले मेरो तौल घटाइदियो। अहिले सोचेको जस्तै भएकी छु।
‘एउटा किताब प्रकाशन गर्न चाहन्छु।’
विभिन्न कामले गर्दा किताबसम्बन्धी केही जानकारी संकलन गर्न सकिएन। त्यसैले योजना पूरा भएन। तर, किताब छाप्ने अठोट मरेको छैन।
हरि निरौला, हास्य कलाकार
‘विवाह गर्र्र्र्ने योजना छ।’
केही पारिवारिक कारणले गर्दा विवाह गर्न सकिएन। योजना, योजनामै सीमित रह्यो। २०७६ सालमा बिहे गर्ने सोच छ।
किरण केसी, हास्य कलाकार
‘आफू बस्ने टोलमा ‘राता मकै गेट’ बनाउनेछु।’
काम लगभग सकियो भन्दा हुन्छ। उद्घाटन गर्न मात्र बाँकी हो। म यत्तिकै बोल्दै बोल्दिनँ। बोलेको काम पूरा गरेरै छोड्छु। वैशाख १५ गते ‘राता मकै गेट’को उद्घाटन छ।
‘सामजिक अभियानमा लाग्ने सोच बनाएको छु।’
योजनाअनुसार अहिले म सामाजिक कार्यमा निकै सक्रिय छु। यो कामले मेरो आत्मालाई शान्ति दिएको छ। सिस्नुपानी नेपालमार्फत मलेसियाको जेलमा रहेका नेपालीलाई फर्काउन लागिपरेको छु। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, आमाबुबा नभएका बालबालिकालाई सहयोग गरिरहेको छु।
‘काठमाडौँबाहिरको कुनै एक जिल्लाको गरिब बच्चालाई पढाउने विचार गरेको छु।’
मैले भनेअनुसार आफ्नो योजना पूरा गरेको छु। पाल्पा, रामपुरको एक जना विद्यार्थीलाई पाल्पामै पढ्ने सामग्री जुटाइदिएको छु। काठमाडौँमा ल्याएर पढाउन नसके पनि त्यहीँ पढ्न व्यवस्था गरिदिएको छु।
‘माछामासु छोड्ने र अमेरिका, हङकङतिर घुम्ने जाने योजना छ।’
‘छोडेँ’ भनेर सबैसामु भनेको त छैन तर खाएको पनि छैन। २०७५ सालमा बनाएका सबै योजना पूरा भए। माछामासु खाइएन। अमेरिका, हङकङ घुम्न पनि गइयो।
सञ्जोक कोइराला, अभिनेता
‘अहिलेसम्म नपुगेको देश घुम्ने योजना छ।’
सोचेअनुसार धेरै देश घुम्न जान सकिएन। अमेरिका र यूएई चाहिँ पुगेँ।